သင်၏ Blog တွင် Twitter Icon တစ်ခုထည့်ပါ Martech Zone
သင်၏ Blog တွင် Twitter Icon တစ်ခုထည့်ပါ
စနေနေ့, မေလ 10, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ငါတွစ်တာမှာငါလုပ်ချင်သလောက်အချိန်မဖြုန်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာကြီးကျယ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ဟာသူတကယ်ထူထောင်ခဲ့တယ် အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှု။ ကျွန်ုပ်အတွက်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုအလိုလျောက်ကြေငြာရန်၎င်းကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ WordPress အတွက် Twitter Updater Plugin ကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုရရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏စုဆောင်းမှုသို့ထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Feed, အီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းအိုင်ကွန်များ ငါ့ဘေးမှာ အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုရှာဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမှတွေ့ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့် - ငါကငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်
အခမဲ့ခံစားရ Twitter အိုင်ကွန်များအားလုံးကို download လုပ်ပါ ငါသူတို့ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ Illustrator ဖိုင်တောင်တောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်၊ မျှော်လင့်ပါတယ် တွစ်တာ မဖြစ်စေဘူး!
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုရယူပါ Twitter တီရှပ်လွန်း!
Tags: twitter အိုင်ကွန်twitter Illustrator
သင်၏အကြောင်းအရာလတ်ဆတ်သော! မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်
မေလ 10, 2008 မှာ 3: 29 pm တွင်
အလုပ်ကောင်း။ အခုလို မျှဝေပေးတာ အရမ်း စေတနာပါ...
မေလ 10, 2008 မှာ 6: 47 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! Steve က ဒီအရာတွေကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းထားရတာ ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။
မေလ 11, 2008 မှာ 8: 11 pm တွင်
ဤအိုင်ကွန်များကို မျှဝေပေးသည့်အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသည့် 'Twitter Boxes' မှ ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည့်အရာများသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏ ဘေးဘောင်တွင် အိုင်ကွန်တစ်ခုကို ထည့်ထားပြီးဖြစ်၍ ကြည့်ကောင်းပါသည်။
မေလ 12, 2008 မှာ 2: 23 AM
ဒီပလပ်အင်ကို အခုလေးတင်ထည့်လိုက်တာနဲ့ (doh!) အကောင့်နဲ့ စာရင်းသွင်းထားတဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို မမှတ်မိတော့ဘဲ၊ မှန်ကန်တဲ့ အကောင့်တစ်ခုကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေလ 12, 2008 မှာ 8: 03 AM
အိုင်ကွန်ကို ချစ်ပါ။ ဘယ်သူသိမလဲ၊ သင်က Twitter အိုင်ကွန်အသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤအပတ်နှောင်းပိုင်းတွင် မစတင်မီ ဝဘ်ဆိုက်အသစ်တွင် ၎င်းကို ညှစ်ယူနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
မေလ 13, 2008 မှာ 5: 37 AM
သြဂုတ်လ 14 ရက် 2008 ခုနှစ် 10:27 နာရီ
အိုင်ကွန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသည်ငါ့ site ပေါ်တွင်အသုံးပြုနေပါတယ်!
1:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 21 မှာ
Doug၊ မင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆေးလုံး ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု သောက်ခဲ့လား။ ဒါက Perfect ပဲမို့လို့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဒီဇိုင်းဘလော့ဂ်တွင် Twitter ထည့်ရန် စဉ်းစားနေပါသည်။ BAM က ဒီမှာ !
တစ်ဖန်၊ ထူးထူးခြားခြားနှင့် အလွန်အသုံးဝင်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်ပလပ်အင်ကဲ့သို့ပင်။
1:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 58 မှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Joni မင်းက ကြင်နာလွန်းတယ်။
29:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 8, 41 မှာ
အိုး၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ twitter မှာ တစ်ခုခုရှာဖို့ စွန့်စားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ twitter icon တစ်ခုကို ရှာဖို့ Google ကပဲ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အလုပ်ကောင်းတယ်၊ ငါ့မှာ ဆိုဒ်များစွာရှိလို့ ဒါကို နေရာတော်တော်များများမှာ သုံးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ 21, 2008 မှာ 12: 18 AM
ဤအလွန်ရက်ရောသောကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် ပုံမြေပုံကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ကျက်သရေရှိလှသည်။
28:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 49 တွင်
မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ LiveJournal ပရိုဖိုင်တွင် twitter အိုင်ကွန်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
မတ်လ 7, 2009 မှာ 12: 20 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug။ လောလောဆယ် Blogger မှာ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို စတင်နေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Twitter အိုင်ကွန်ကို ရှာဖွေနေပါတယ်၊ ဒီစာမျက်နှာက ရလဒ်တွေရဲ့ ထိပ်မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်နေမည်မှာ သေချာနိုင်သည်၊ ဤဆိုက်သည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အရင်းအမြစ်များ၏ ရတနာသိုက်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 8, 2009 မှာ 12: 47 AM
တွစ်တာပုံများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် – 50 x 50 ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ယခုပြသထားပါသည်။
မတ်လ 18, 2009 မှာ 5: 02 pm တွင်
သင့်အိုင်ကွန်များကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း တွစ်တာမှာ သုံးနေပါတယ်။
သင့်အိုင်ကွန် စွမ်းဆောင်မည့်နေရာ အပ်ဒိတ်အတွက် ဆက်သွယ်ပါ။
မတ်လ 20, 2009 မှာ 1: 15 AM
ဤတွစ်တာအိုင်ကွန်များကို ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်မှာ တစ်ခုပဲ တင်လိုက်တယ်။